cross-manipulator - China Langzhi Welding Fitaovana
Indray Mitopy Maso welding ny rafitra dia ahitana ny hazo fijaliana manipulator, welding nitodika-roller, welding rotator sy ny mpanampy fitaovana .Appliances: tsindry fanaka lehibe savaivony sodina longitudinal & boribory seam welding sy boribory fonony ary mety welding kiho. Mandany TIG izahay ary plasma welder, ranon-dra toy ny tena ratsy, TIG (fahana tariby) toy ny fonony lafiny .One-welding, lafiny roa-koronosy. Arc anaty rano toy ny fonony koa hamolavola araka ny welding teknolojia takina. Anjara: flexiblely convery, mpiara ...
Ny welding rafitra dia ahitana ny hazo fijaliana manipulator, welding nitodika-roller, welding rotator sy ny mpanampy fitaovana .Appliances: tsindry fanaka lehibe savaivony sodina longitudinal & boribory seam welding sy boribory fonony sy ny kiho mety welding.
Anjara: flexiblely convery, mety operation.Customize tsy ampy araka ny fepetra.
welding halavan'ny isan-karazany 1500mm-12000mm
welding savaivony isan-karazany 400-5000mm
Trolley haingana 0-1500mm / min
welding hateviny 3-30mm
Previous: amin'ny Internet Stainless vy
Manaraka: Gantry welding rafitra